Hirshabelle ayaa lagu Ammaanay Qoonadada Haweenka – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Hirshabelle ayaa lagu Ammaanay Qoonadada Haweenka
Marwo Batuulo oo ka hadlaysay kadib markii kursigii ugu dambeeyay ee Aqalka Hoose ee haweenka lagu soo doortay ayaa sheegtay in Dowlad goboleedka Hirshabeelle uu yahay maamulkii ugu horeeyay ee soo buuxiya qoondada haweenka taasoo ahayd boqolkiiba soddon.
“Hirshabeelle waa dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee soo buuxiya qoondada haweenka taasoo 37 kursi oo loo tartamayay 10 ka mid ah haween lagu doortay.”ayay tiri Marwo Batuulo.
Marwo Batuulo ayaa ku ammaantay haweenka lagu soo doortay magaalada Jowhar inay yihiin kuwo aqoon leh isla markaana wax u qaban kara shacabka Soomaaliyeed, iyadoo sheegtay in doorashada Aqalka Hoose ee ka dhacday magaalada Jowhar ay ahaayeen kuwo si hufnaan ah loo qabtay.
Inkastoo Marwo Batuulo Shiikh Axmed Gabale guddoomiyaha ururka Haweenka Soomaaliyeed ay u muuqato inay ku qanacsan tahay qoondada haweenka ee Hirshabeelle ayaa hase ahaatee waxaa weli jira labo kursi oo ay guddiga doorashada heer Federal diideen natiijadooda kadib markii ay rag ku tartameen, iyagoo sheegay in dumar laga doonayay in kursigaas ay ku tartamaan
Previous: SAWIRRO:Sedax Beelood oo kamid ah Beelaha Wuqooye oo si cad ugu soo horjeestay Qaabka loo Maamulay Kuraastii ay lahaayeen.
Next: Doorasho Natiijadeedii La Hayay Ayaa maanta muqdisho ka Qabsoontay